IINKQUBO EZILI-10 EZIGQWESILEYO ZOKUBONISA IIFOTO ZAKHO - ITHAMBILE
Iinkqubo ezili-10 eziGqwesileyo zokuBonisa iiFoto zakho
Uyakuthanda ukuthatha iifoto? Wenza ntoni ngonqakrazo lwakho olufanelekileyo? Ngaba uyithumela kumaqonga akho eendaba ezentlalo anee-hashtag eziqhelekileyo? Ke nazi iinkqubo ezili-10 ezilungileyo zokuhambisa iifoto zakho.
Impazamo irql ayikho ngaphantsi okanye ilinganayo
Ucinga ukuba sinantoni na kuwe? Iifilitha? Iifilitha ziqaqambile, kodwa oopopayi bapholile ngokwenene. Jonga le! Ngoku ungaphilisa iifoto zakho. Iifoto zoopopayi zivakala zipholile, akunjalo? Yiza! Masibone ukuba singenza ntoni ngeefoto zethu.
Ukwenza ifoto yakho ibe ye-animated ngumsebenzi olula kakhulu. Uninzi lweapps kuGoogle play ziyakwenza oko. Udidekile ukuba ukhethe eyiphi? Kulapho sizolula khona izandla zethu ukukunceda. Sidwelise apha ngezantsi ii -apps ezilishumi eziphezulu zokukhulisa iifoto zakho kwaye ujongeke upholile. Funda inqaku ngokupheleleyo ukonwabele ukonwabisa amaxesha owabambayo.
Ukuba ukwipulatifomu yeendaba zeNtlalo, ke eziapps ziya kuba luncedo ngokwenene. Ngokukodwa ukuba ungumsebenzisi we-Android, sinoluhlu lweeapps zakho. Eziapps zikwiVenkile yokudlala kaGoogle yesixhobo sakho. Sidwelise ezinye zeapps ezinkulu, ezivavanyiweyo ekusebenziseni kwakho. Ungasebenzisa ezi zicelo zilandelayo ukwenza amabali evidiyo kunye neziphumo ezibonakalayo kwimifanekiso eseleyo. Sebenzisa ii -apps ezinconywayo kwaye ufumane isibonelelo esiphezulu.
IINKCUKACHA EZI-10 ZOKUPHILA KWIMifanekiso YAKHO
Ibali leFotoZ yoMenzi weVidiyo kunye neLoop yeVidiyo yoPopayi
Ifoto yoopopayi kunye neLoop yoopopayi
I-Pixaloop izisa imifanekiso yakho ebomini kwimizuzwana embalwa. I-Pixaloop inezixhobo ezinamandla ezikunceda uhlele iifoto ezihambayo. Ewe! I-Pixaloop inokujika iifoto zakho ezimileyo ukwenza oopopayi. I-Pixaloop ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokucoca ulwelo kunye neziphumo. Ngaphandle koko, ivumela abasebenzisi bayo ukuba babambe iindawo ezithile zomfanekiso.
Ukuba uyakuthanda ukwenza ii-GIF ngemifanekiso yakho, emva koko i-Imgplay yeyakho. Imgplay yeyona ndlela ilula onokuthi wenze ngayo ii-GIF. Ungasebenzisa iifoto zakho kunye neevidiyo ukwenza ifayile ye Ii-GIFs . Inika izixhobo ezahlukeneyo ezinamandla zokuguqula iifoto kunye neevidiyo zakho zibe kwifomathi yeGIF. Unokusebenzisa iifilitha kunye nefuthe kolu setyenziso. I-Imgplay ikwabonelela ngeendlela onokukhetha kuzo ukutshintsha ireyithi yesakhelo kwaye kwangoko wabelane ngee-GIFs zakho kwimidiya yoluntu. Kodwa ekuphela kwendlela yokubuyela umva yi-Imgplay watermark ezinamathela kwii-GIF zakho ngokuzenzekelayo. Ungayisusa i-watermark kuphela xa uthenga iNgxelo ye-premium ye-Imgplay (Ukuthenga ngaphakathi nohlelo).
I-Movepic yenye yezonaapps zilungileyo zokuhambisa iifoto zakho.Ungaphilisa nantoni na ngokuzoba indlela yoopopayi. Ungazisa imeko emnandi kwiifoto zakho ngokusebenzisa le app imangalisayo. Ineziphumo ezininzi zokwenza ukuba amafu adade, ukuhamba kwamanzi, njl. Njl. I-Movepic inokuba ngumhleli wesithombe sakho ogqwesileyo kunye nopopayi. Unokwabelana ngokuhlela kwakho kwangoko kwiiakhawunti zakho zemidiya yoluntu ezinje nge-Facebook, Instagram, Tik Tok, njl.
Funda kwakhona: Ungayicima njani i-iPhone yam ukhetho
KwiMovepic, unokufaka iifilitha nasemva kokwenza ifoto okanye ividiyo yakho. Ngokufana ne-app yangaphambili, nayo, iza ne-watermark. Ngaphandle kokuba uthenge i-premium, i-watermark iya kubakho.
Ibali leFotoZ yoMenzi weVidiyo kunye neLoop yeVidiyo yoPopayi iya kuba luncedo xa usenza amabali akho abonakalayo. KwiNdaba yeVidiyoZ yoMenzi weVidiyo kunye Isiporo Ividiyo yoopopayi, ungongeza iziphumo kwifoto yakho. I-StoryZ iza nemiphumela emininzi yokugquma eyenza imifanekiso yakho ibonakale ipholile. Unokwenza ubugcisa bedijithali kunye nevidiyo ngomculo. Iza nezixhobo ezilula, ezilula zomsebenzisi. Njengeeapps zangaphambili, nayo le, inikezela ngokuthenga ngaphakathi nohlelo.
IPixamotion Loop sisixhobo esihle sokwenza imifanekiso yakho ibonakale. Ungayisebenzisa le app ukwenza iifoto ezibukhoma, imvelaphi eshukumayo, kunye neephephadonga eliphilayo. Unokwenza iividiyo ezimfutshane ezimangalisayo usebenzisa ii-app. Ungayisebenzisa le app ukwenza kunye nokwabelana ngamabali akho abonakalayo kwiMithombo yeendaba yeNtlalo. Le app iza noopopayi abatsala amehlo kunye nezixhobo zokuhlela ezilula. Ungasebenzisa iPixamotion Loop Animator ukwenza oopopayi abahlekisayo ekuhambeni.
Ukuba uyakuthanda ukwenza imizobo eshukumayo eshukumayo, iZoetropic yeyakho. I-Zoetropic yinkqubo entle enezinto ezinamandla kunye nezinto ezinokubakho. Unokunika ubomi kwimifanekiso yakho usebenzisa iZoetropic kwaye wenze iziphumo ezibonakalayo ezintle. Insiza kulula ukuyisebenzisa, kodwa ingxelo yasimahla inezixhobo ezinqunyelwe. Inguqulelo ye-PRO okanye ingxelo ehlawulelweyo inikezela ngezixhobo ezisemgangathweni eziluncedo ekuhleleni ngobuchule.
I-VIMAGE ICinemagraph yenye yezonaapps zibalaseleyo zokukhulisa iifoto zakho. Ungasebenzisa olu setyenziso ukongeza izinto ezininzi ezihamba nefoto kunye neefilitha. Insiza isebenzisa KWI (Ubugcisa beArtificial Intelligence) esekwe kwizinto eziphilayo ezinje ngesibhakabhaka. Unokwenza imifanekiso emihle kunye nee-GIF ezintle usebenzisa i-VIMAGE. Nge-VIMAGE, unokukwenza uphilise ifoto okanye ividiyo yakho. Ngaphandle koko, unokongeza izandi zakho kwimifanekiso okanye kwiividiyo zakho. Njengeeapps zangaphambili, kuya kufuneka uthenge ingxelo ye-premium ukususa i-VIMAGE watermark.
Ukuhlaziya abaqhubi be-realtek windows 10
Khuphela i-VIMAGE Cinemagraph
I-Lumyer ibonelela ngezihluzo ezizizo ezenzelwe ukuphucula iifoto zakho eziphilayo. Unokwenza iifoto zakho zobugcisa ziphile usebenzisa uLumyer. Ungaguqula iifoto zakho zibe yimisebenzi yobugcisa usebenzisa inani lokucoca kunye neziphumo ezinikezelwa nguLumyer. Unokongeza iziphumo zevidiyo kule app. I-Lumyer kulula ukuyisebenzisa, kwaye unokwenza ii-GIFs kule app.
Ukuba ubathanda nyhani iifoto zakho, iPixAnimator yenye yezonaapps zilungileyo kuwe. I-PixAnimator yongeza ii-loops ezintsha yonke imihla kuwe. I-Pixanimator ibonelela ngeendlela ezininzi zasimahla. Zingaphezulu kwe-150 iilogo kwiPixAnimator ngaphandle kweendleko. Ezinye iilogo ziza nokuthengwa kwepremiyamu.
isango elingagqibekanga alifumaneki windows 10 wifi
Ifoto yoPhilayo kunye neLoop yoopopayi lolunye usetyenziso olukhulu kwiVenkile yokuDlala kuGoogle. Ungazitshintsha ngokulula iifoto zakho zibe zintle, oopopayi abaphilayo usebenzisa le app. Inika iintlobo zeziphumo kunye nokugquma, kwaye ungasebenzisa le app ukwenza oopopayi besinema. Le app iza nesifundo sokuqonda ngokulula iapp.
Khuphela oopopayi beFoto kunye neLoop yoopopayi
Siyathemba ukuba uza kusebenzisa eziapps zingasentla kwaye uguqule amaxesha akho abe kokuphilayo. Ingaba ulunde ntoni? Qala ukonwabisa imifanekiso yakho ngoku!
Kunconywe: IiWebhusayithi ezi-7 eziGqwesileyo zokuFunda ngokuSebenza
Yazi usetyenziso olungcono? Nceda usazise.
Yiloo nto ke eyinqaku lethu le-10 zeNkqubo eziGqwesileyo zokuBonisa iiFoto zakho. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye iingcebiso, ungathandabuzi ukunxibelelana nathi. Sishiyele izimvo zakho kwibhokisi yezimvo. Siza kuyiphendula imibuzo yakho ngokukhawuleza.
chrome ayisebenzi emva kohlaziyo lweWindows
windows 10 ayiphenduli emva kohlaziyo
windows 10 isezantsi ngempazamo yememori
windows 10 ukuskena nokulungisa idrive enamathele kwi-100
Windows 10 umthetho olandelwayo ulahlekile
iifestile ezili-10 ze-wifi ziyehla ngamanye amaxesha